I-Fabulous Glamping Getaway, i-Refugio La Totora - I-Airbnb
I-Fabulous Glamping Getaway, i-Refugio La Totora
Le ndawo yemvelo ye-Glamping eyingqayizivele esifundeni, inikeza ulwazi lokukanisa ngaphandle endaweni yomlingo "Andino", ujabulele imvelo ngaphandle kokulahlekelwa ukunethezeka okufunayo. Jabulela ukuhlala kwakho ngezinhlelo zemvelo nemisebenzi, eklanyelwe ukwazi ubuhle besifunda, ukudla kanye nesiko lendawo.
Umqondo we-Glamping (Glamorous Camping), ubonakala njengesiphakamiso esisha nesikhulayo emhlabeni wonke, esiklanyelwe ukujabulela ulwazi lokukanisa ngaphandle ngaphandle kokuyeka ukunethezeka kwendawo, e-Refugio la Totora sikunikeza amatende kanokusho anazo zonke izinsiza zokwenza hlala ungakhohlwa, geza ngamanzi ashisayo, i-wifi, indawo yokupaka, ikhishi elihlomele nezindawo zokuxhumana eziklanyelwe ukwabelana ngolwazi oluyingqayizivele.
ILaguna de la Cocha etholakala kumakhilomitha angama-20 ukusuka edolobheni lasePasto, iyindawo enhle yemvelo, emenyezelwa njengechibi lesibili ngobukhulu ezweni elakhiwe iziqiwu eziningi zemvelo ezinezinhlobo ezihlukile zezitshalo nezilwane, futhi enendawo engcwele iLa Corota, ethathwa njengendawo yokulondoloza imvelo. indawo yamandla omhlaba egcwele umlando, izinganekwane nesiko lase-Andean.
I-Laguna de La Cocha iyixhaphozi lokuqala lase-Colombia ukufakwa esivumelwaneni sokuvikela samazwe ngamazwe se-Ramsar.
Ngaphambi kokufika kwakho, singathanda ukwazi ukuthi yimiphi imisebenzi oyithandayo nalokhu singakunikeza amapulani ahlukene kanye nemisebenzi yezokuvakasha ejwayelekile yesifunda sicabanga ngazo zonke izabelomali kanye nokutholakala kwezivakashi zethu.
Ngaphambi kokufika kwakho, singathanda ukwazi ukuthi yimiphi imisebenzi oyithandayo nalokhu singakunikeza amapulani ahlukene kanye nemisebenzi yezokuvakasha ejwayelekile yesifunda…